Nipoitra ny fanavakavaham-bolokoditra tao Portiogaly taorian’ny nivoahan’ny lahatsary iray nampiseho ny herisetra nataon’ny polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2019 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, Español, Ελληνικά, čeština , Français, русский, Italiano, 日本語, Deutsch, Nederlands, Português
Nampiseho ny mpitandro ny filaminana nikasi-tanana ireo olona ny lahatsary iray izay niparitaka be. Vehivavy roa no naratra, hoy ny tatitra nataon'ny Deutsche Welle.
Tao anatin'ny roa andro taoriana, manodidina ny olona an-jatony no nanao hetsi-panoherana manohitra ny herisetran'ny polisy sy ny fanavakavaham-bolokoditra tao amin'ny Arabe Liberdade, fihaonan-dalana lehibe iray any Lisbonne. Olona efatra no nosamborina ny andro faharoa taorian'ny fifandonana tamin'ny polisy, hoy ny tatitry ny RTP Portugal sy ny Fahitalavitra SIC .
Tao amin'ny lahatsary niparitaka be izay nampiseho ny fihetsiketsehana tamin'ny 22 Janoary dia nisy vehivavy iray nidera ny polisy ary nanompa ny foko vitsy an'isa monina ao Portiogaly. Nisy fotoana izy niteny hoe: “Ny volonkoditra izay tsy mitovy amintsika Portiogey fotsy hoditra dia tsy maintsy miafara amin'ny fanakorontanana ny firenentsika foana .”
Raha naneho hevitra tamin'ity lahatsary ity dia nilaza i Edgar Barroso avy any Mozambika hoe:
Nilaza i Boa Monjane, Mozambikana mpianatra any Portiogaly fa mampiseho ny fanavakavaham-bolonkoditra izay tena lalim-paka ny fihetsiky ny polisy:
Namoaka fanambarana izay milaza fa manara-maso ny raharaha ny Masoivoho Angoley any Lisbonne.
Namoaka lahatsary tao amin'ny Instagram manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra i Sílvio Nascimento, mpilalao sarimihetsika Angoley sady mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra any Portiogaly.
Ao anatin'ny fomba fijery hafa, nanontany ireo mponina any Jamaika izay mitaraina momba ny fanavakavaham-bolonkoditra i Lazáro Mabunda, mpiseran'ny tambajotra sosialy, avy any Mozambika:
Nilaza i Rubbem, mpikatroka sady mpandraharaha monina ao Luanda fa maro ireo Angoley no mifindra monina any Portiogaly noho ny tsy fahampian'ny varavarana misokatra any amin'ny fireneny:
Cap Vert 2 herinandro izay